GTT INTER GE-Hafatra ho an’ny vahoaka Malagasy : « Arovy ny Firenena sy ny Taranaka | «Tsimok'i Gasikara
Efa 2 volana mahery izao no vita ny fifidianana izay tsy nifaneken’ny rehetra noho ny sandoka sy tery vay manta natao tamintsika. Kanefa iaraha-mahita fa tsy miroso any amin’ny làlana tokony izorany ny Firenena. Mbola krizy politika hatrany no mitohy raha jerena ny zava-mitranga tato ho ato. Efa nampoizina mihitsy izao fizotran-javatra izao noho ny famolavolana fifidianana kitoatoa ho an’ny Malagasy izay notohanan’ny ny Fianakaviambe Iraisampirenena.
Hita soritra fa sarotra sy tsy mazava ny fampiharana ny Lalam-panorenena, izay tsy nifanekena fa notefen’ny FAT irery tamin’ny 2010, ary hita fa mikatso sahady ny fanendrena Praiminisitra, izay asa voalohany tokony tontosain’ Atoa Rajaonarimampianina. Ny vokany dia mitohy ny governemanta tetezamita tarihin’Atoa Beriziky satria nisafidy ny haka fotoana maharitra Atoa Rajaonarimampianina.
Nisy ihany ny fanendrena natao teo anivon’ny andrim-panjakana sasany kanefa toa tapi-maso fandrebirebena sy fampatoriana ny Malagasy fotsiny izany. Manjaka hatrany ny kitranoantrano. Ireo mpitondra sasany vao notendrena dia mpiara-nandray anjara mivantana na ankolaka tamin’ny fanonganam-panjakana avokoa. Anisan’izany:
· Atoa Jean-Eric Rakotoarisoa, mpahay lalàna sady mpanentana mivantana ao amin’ny SEFAFI (Sehatra Fanaraha-mason’ny Fiainam-pirenena). Ny fanendrena azy ao amin’ny HCC dia nolavin’ny vondron’ny mpitsara. Ary Voalaza ombieny ihany koa fa anisan’ny mpiray tsikombakomba tamin’ny mpanongam-panjakana tamin’ny 2009 io SEFAFI io.
Mandalo fotoan-tsarotra hatrany ny Firenena,kanefa tsy afaka ny ho kivy isika vahoaka Malagasy fa zo sy adidy hoan’ny taranaka fara-mandimby ny fiarovana ny harem-pirenena.